Akụkọ ifo: Ihe mere Nwaanyị anaghị arị elu – hoo!haa!!
I lezie anya, ihe ndị ụfọdụ na-eme mgbe Chukwu Abịama kechara elu na ala, anaghịkwa emezi oge ugbua. Eleghị anya, n’ihi oke ọchịchọ na ka ahụtachaa ndị mmadụ. Ndị Igbo kwuru ya hoo haa na ọ bụ ka ahụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n’isi.
Na mbụ, ịrị elu bụ ihe dịịrị nwoke na nwaanyị, oge ụfọdụ, a na-eji ya eme ihe egwuregwu ma ọ bụ ihe ima aka n’etiti ụmụnwoke na ụmụnwaanyị, ma na ọ bụ ọtụtụ butere tụwịm; ihe mere ede o jiri bewe zabirim zabirim; ụmụnwaanyị ụfọdụ dịka Gịnịgeme.
O nwere otu obodo mmadụ anghị ekwute ihe ọ hụrụ ma ọ ria elu. Gịnịgeme banyere obodo a wee rịa elu otu osisi kpọrọ nkụ n’ọnu, ma ukwu ya dị ndụ. Ka ọ nọ n’elu osisi a, ọ hụrụ otu nwaanyị puru otu anya n’egedege ihu ya. Ka nwaanyị a saghere ọnụ ka o kwuo okwu, Gịnịgeme were hụzie nke e ji adara enwe n’elu; nwaanyị nwere naanị otu mkpụrụ eze gbagọrọ agbagọ ka ọgụ ndị ịzaa.
Nwaanyị a gwara Gịnịgeme ka ọ ghara ịta pịm gbasara ihe ọ hụrụ maka na a naghị akọcha ka e si hụcha. Ginigeme ekweghi ka nwaanyị kwupu okwu ọ kpụ n’ọnụ wee nọrọ n’elu ebe ahụ tibe mkpu ka ọkụkọ na-achọ iyi akwa, kpọwa ọha obodo ka ha bia soro ya hụrụ ihe ọ hụrụ, tupu a sị na agwọ ya bụ otu onye hụrụ aghọọla eke. Ọtụtụ ndị bịara, onye laa ọ kọọrọ ibe ya, ọ bịa were anya yah ụ, maka na ozu agụ dọ n’ala anaghị adị mma ige naanị na ntị, mmadụ zara aha zaa Ahụnaanyaekwe.
Ka e mechaara, nwaanyị otu eze a rịọrọ ka a kpọọrọ ya Eze obodo ahụ, ka Eze bịara, nwaanyị otu anya ahụ bụ onye ozi Agbara, gwara ya na bido ụbọchị ahụ gawa, na onye ọbụla tinyere ụkwụ n’ala ahụ(nke nwaanyị otu anya)ga-abụ onye nwụrụ anwụ. Ka a ka na-ekwu, nwwanyi ahụ kpọọrọ anya niile hụrụ ya laa ala mmụọ, tinyere Eze. Mmadụ olenaole ndị agaghị hụ ihe ịnịgeme hụrụ bụrụzie ndị fọdụrụ.
Site n’ụbọchị ahụ ndị obodo were kwuo na mma gburu Eze anaghị adị, nke a mere ha jiri tie iwu sị na nwaanyị ọbụla agaghịkwa arị elu osisi ọzọ, ka ihe mere mbeekwu, ghara ime nwaaniga.
Ọ bụ nke a mere na rue taa, na ụmụnwaanyị anaghịkwa arị elu, ọ kacha ndị nọ na di
Previous Post: NDI ABIA NA IMO NA-EWELIRI UGWUANYỊ AKA
Next Post: Ilu Igbo Maka Ndị Umengwụ
Nwanne, jisike oooo!